Cudurrada Jabtada iyo Waraabowga
Author Topic: Cudurrada Jabtada iyo Waraabowga (Read 2051 times)
« on: February 15, 2018, 07:12:43 PM »
Mowduuceena ku saabsan Wacyi galinta bulshada, waxa aynu markaan ku soo qaadaneynaa laba cudur oo ka mid ah cudurrada faafa ee lagu kala qaado Galmada.
Labadaan cudur oo inta badan ay bulshadeenu wada garaneyso balse ay jiraan dad badan oo isku qalda labada cudur, halka ay qaar kale oo badani u maleynayaan in labada cudur ay yihiin hal cudur oo leh laba magac, inkasta oo aysan isku mid aheyn oo mid walbaa si gooni ah loo daaweeyo.
Labada cudur ee aanu halkaan ku soo koobi doono, waxa ay kala yihiin:
1 Cudurka Jabtada iyo
2 Cudurka Waraabowga.
Akhriso, Faahfaahinta Cudurka Jabtada
Cudurka Jabtada waa cudur ka mid ah cudurrada faafa ee la iskugu gudbiyo Galmada, waa cudur ku dhaca hab-dhiska taranka ee ragga iyo dumarka.
Cudurka Jabtada, waxa sababa bacteria loo yaqaanno Neseria Gonorrhea amma Gonococci, waxaana jeermiska cudurkaan la ogaaday sannadkii 1879kii.
Xilli huuriska cudurkaan wuxuu gaadhaa 15 ilaa 30 maalmood.
Kaadida oo jaalle (yellow) noqota
Kaadida oo xanuujisa marka ay soo baxeyso
Guska oo xanuuna
Kalyaha oo xanuuna.
Kaadida jaalle noqota
Siilka oo xanuuna (oo lahan kaca)
SIDA UU U FAAFO
Cudurka Jabtada, waxaa lagu kala qaadaa marka ay laba qof oo uu midkood qabo cudurka jabtada ay isku galmoodaan.
Waxaana lagu ogaan karaa iyada oo la baadho kaadida qofka.
Daaweynta cudurka jabtada, waxay ku xidhan tahay, in marka hore qofka uu sameeyo baadhitaan kaadida ah, waxaana daawada qora dhakhtar, ka dib, marka uu baadhitaan dhinacyo badan ah & wareysi la yeesho qof qaba cudurkaan.
Hase yeeshee, qofka caafimaadkiisa kale uu fiican yahay, daawooyinka ugu caansan ee cudurka jabta looga daaweeyo, waxaa weeye:-
-Gentomycine Injection 80mg 1x2x7 maalmood
-Penicillin V tab 250mg 1x2x7 maalmood
-Penicillin G Injection 1gr 1x1x7 maalmood
Akhriso, Faahfaahin cudurka Waraabowga
Cudurka waraabowga, waxaa lagu kala qaadaa Galmada, wuxuuna ka mid yahay cudurrada halista ah ee faafa.
Calaamaddiisa ugu soo horeysa, waxaa lagu gartaa boog sida Nabarka oo kale ah oo loo yaqaanno Syphilis Ulcer. Nabarkaas oo lagu arki karo cawrada ragga iyo dumarkaba. Haweenka wuxuu uga soo baxaa gudaha siilka, mana la ogaan karo, sababtoo ah, wuxuu jidhka qofka ku maqnaan karaa muddo 9 ilaa 90 maalmood ah, waana nabar aan xanuun laheyn, waxa uuna ka mid yahay cudurrada halista ah ee haddii aan si la hubo loo daaweynin baabi'in kara xubno badan oo jidhka ka mid ah.
Cudurka Waraabowga, waxaa sababa, bacteriyo loo yaqaanno Treponema Palladium, sidaas daraadeed, cudurkani wuxuu lee yahay saddex marxaladdood, waxaanay kala yihiin:
2 ilaa 3 bil waxaa la arkaa nabar aan xanuun laheyn oo ka soo baxa cawrada qofka.
Waxaa la arkaa nabar xanuun leh oo ka soo baxa Jidhka, Qanjidhada oo barara iyo Madax xanuun.
Laba sanno ka dib, waxaa la arkaa:
Maqaarka oo burbura
Timaha oo go' go'a oo bilaaba daadasho
Neerve xanuun iyo
RAADKA UU KU REEBO HAWEENKA AAN LAGA DAAWEYNIN
Dhicis soo noq noqda
Ilmaha oo dhimasho ku dhasha
Ilmaha oo dhasha iyaga oo aan billo dhammeysanin
Ilmaha oo ku dhasha calaamaddaha cudurka waraabowga.
Daawada waxaa qofka u qora dhakhtar, ka dib, marka uu sameeyey baadhitaan iyo wareysi uu la yeeshey qofka qaba cudurkaan.
Daawooyinka ugu caansan ee cudurka waraabowga waxa weeye:
Benzathine Penicillin 1.2 unit by I/M inj, 3 maalin ka dib
Benzathine Penicillin 2.4 unit by I/M inj oo lagu darey Vitamin B Complex inj 6 maalmood ka dib.
DAAWADA WAA IN UU QORO DHAKHTAR.
Waxaan mowduucaan ku ogaaney in aysan labadaan cudur isku mid aheyn dhinaca daaweynta, waxa kaliya ee ay wadaagaan waa sida ay u faafaan oo ah, markii uu qof qaba cudurradaan midkood, u gudbiyo qof kale oo aanan qabin xanuunnadaan.
Haddii uu qofku iska shakkiyo, waa in uu la xidhiidhaa Dhakhtar si loogu xaqiijiyo xaaladdiisa caafimaad, Insha Allaah.
Views: 26995 July 05, 2015, 10:14:33 AM
Views: 39450 September 14, 2016, 12:26:51 PM
Views: 39949 May 01, 2016, 04:55:03 PM
Views: 44224 September 16, 2007, 12:52:06 AM
Views: 9040 December 04, 2009, 11:07:48 AM